UN palai le hminthang ṭhenkhat telin Kawlrammi mipum 17 pawl cu rammi sinak hlit sak - Falam Online Media
March thla thok in SAC cozah dodaltu mihminthang ṭhenkhat le NUG thawn pehpartu hruaitu ṭhenkhat cu SAC ralhraang in rammi sinakahlitsak thuaphuang rero zo ih, tuni April 1 khalah Myanmar ram hrang UN palai Kyaw Moe Tun telin Kawlrammi 17 pawl cu rammi sinak an hlit sak saal.
Cupawl cu rampi phungdaan pahbal in ramleng ah an tlan ih Kawlram hlawknak dal theitu sual an tuah ti`n ralhraang inapuh hai ih rammi sinakahlit sak haiasi.
Tuni April 1 ih rammi sinak hlit sak tuar pawl cu ဦးမောင်မောင်လတ်၊ ဦးကျော်မိုးထွန်း၊ အောင်ကျော်နိုင်၊ မြမြကြည်၊ ကျော်စွာမင်း၊ သက်ထားမြရည်စံ၊ စုစုအောင်၊ ကျော်စွာထွန်း၊ ကြူကြူမြင့်၊ မြတ်သွယ်အောင်၊ ယမင်းယု၊ ရဲခေါင်၊ ဟန်ထူးလွင် a.k.a ကျားပေါက်၊ မေဦး a.k.a ဟိန်းမင်းဦး၊ ညီညီသရဝဏ်(ပြည်)၊ ဟန်လင်း le ဒေါင်း tipawl an si.
March4ih rammi sinak hlit sak tuar pawl cu ဦးဇော်ဝေစိုး၊ ဦးရည်မွန်၊ ဦးလွင်ကိုလတ်၊ ဒေါ်ဇင်မာအောင်၊ ဦးထင်လင်းအောင်၊ ဦးအောင်မျိုးမင်း၊ မအိသဉ္ဇာမောင်၊ ဒေါက်တာဆာဆာ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်း le ပန်ဆယ်လို tipawl an si.
March7ih rammi sinak hlit sak tuar pawl cu ဆောင်းဦးလှိုင်၊ မောင်မောင်အေး၊ ဒေါ်ခင်မမမျိုး၊ ဦးမောင်မောင် a.k.a ပြည်သစ်ညွန့်ဝေ le ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း tipawl an si ih an zaten mipum 33 an si.
← SAC ralhraang in Chin ram PDF sakhaan pakhat an la
Mi khihhmuh nakin Assam Rifles in India-Myanmar ramri ih ralthuam thupmi ṭhenkhat an kai →